Budata Desktop Calendar maka Windows
Budata Desktop Calendar
Free Budata maka Windows (0.50 MB)
Budata Desktop Calendar,
Desktọpụ Desktọpụ bụ otu ngwa eji eme ihe na-adịghị mfe ma dịkwa mfe iji nyere gị ohere iji kọmpụta kọmpụta gị nweta kalịnda gị nụzọ dị mfe. Nihi ngwa m na-atụ anya na ndị ga-enyocha atụmatụ ha, nzukọ na kalenda ugboro ugboro, ị nwere ike ileba anya oge gị oge ọ bụla ị na-ele desktọọpụ gị.
Ebe ọ nwere usoro dị mfe iji, ị nwere ike mezue mmezi gị niile ma tinye kalenda gị na desktọọpụ gị nkeji ole na ole mgbe ị wụnyechara ya. Ọ bụrụ nịchọghị ebe etinyere kalenda na desktọọpụ, ị nwere ike ibugharị ya gaa na ọkwa ọhụrụ yana ịpị aka ole na ole ka ọ ghara ichie na akara ngosi gị ndị ọzọ.
Ndị ọrụ nwere ike icheta ụbọchị ma ọ bụ nzukọ ha ruru site na iji nhọrọ ncheta dị na mmemme ahụ. Ya mere, enwere ike iji ngwa ahụ ọ bụghị naanị iji chọpụta ụbọchị, kamakwa iji mụta banyere oge gị ma dọọ gị aka ná ntị.
O bu ihe nwute, usoro ihe omume a enweghi ihe omuma zuru ezu, ya mere o nwere ike iguzo ya dika idi mfe, ma oburu na ichoro ihe omume obula nke nwere otutu ihe di omimi, ogaghi ezuru igbo mkpa gi. Ekwenyere m na ọ bụ netiti ngwa ị nwere ike ịchọgharị dịka ọ naghị akpata nsogbu noge ọrụ ya ma ọ naghị eri akụrụngwa usoro.
Desktop Calendar Ụdịdị
Nha faịlụ: 0.50 MB
Mmepụta: Glenn Delahoy